Thenga i-Magic Mini Car Wash Blue Clay - Ukuhanjiswa kwamahhala futhi akukho ntela | WoopShop®
I-Magic Mini Car Wash Blue Clay
$ 10.99 Intengo ejwayelekile $ 17.99
I-Magic Mini Car Wash Blue Clay ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Umbala: Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka
Isisindo: 100 gram / per
Ubude bento: 11.5cm
Uhlobo Lwamagama: Hlanza Ubumba
Izici ezikhethekile: Washa imoto
Ububanzi bezinto: 7.5cm
I-Diameter yento: I-5inch
Into Ukuphakama: 5cm
Ingasusa izinhlobo ezahlukahlukene zamabala njengokugqwala, ukungcoliswa kukawoyela.
Ifanele noma imuphi upende wemoto wombala, ayilimazi upende wemoto. Ixhasa ukusetshenziswa, ukuphepha, kanye nemvelo.
Ingasetshenziswa engxenyeni yomzimba wemoto, ingilazi, ingilazi ebusweni, ibhampa, njll.
Kuyindlela enhle yokuhlanza imoto yakho. Sicela ugcinwe ebhokisini elivaliwe ukuze uphinde ulisebenzise.
Sebenzisa ibha yobumba kunoma imuphi umsebenzi wokupenda ongaphandle, insimbi epholishiwe, ingilazi, noma ipulasitiki ebonakalayo ebonakalayo. Ibha yobumba kulula ukuyisebenzisa: geza imoto, bese uyisebenzisa ngamanzi
1 x 100g Ubumba Oluhlanzekile
Into enhle, uthathe owesibili
waneliseke kakhulu, umkhiqizo omuhle !!
Ukuhambisa okusheshayo nokungaphumi phezulu kwe-EE ^ ^